Waa kuma Muuse Suudi Yalaxoow? - Bulsho News
Anfield offers reminder of its magical power on Liverpool rollercoaster...
Xigashada Sawirka, FACEBOOK/ MUSE
Muuse Suudi Yalaxow waxaa uu dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Cali Mahdi ka soo noqday wasiirka ganacsiga inkastoo markii dambe uu ka mid ahaa hogaamiye Kooxeedyadii ugu awoodda badnaa Soomaaliya ka hor inta aanay meesha ka saarin Midowgii Maxaakiimta sannadkii 2006-dii.
Isaga oo ka mid ah hoggaamiye kooxeeyadii ugu awoodda badnaa ee Muqdisho ayay caasimadda soo degtay dowladda kumeel gaarka ahayd ee uu madaxda ka ahaa Madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan , waxaana dhacday in uu dowladdaasi aad uga horyimid, hadaladii laga diiwaangaliyayna waxaa ka mid ahaa “Mineey bac tahay waa bujinaynaa, mineey bir tahay waan ka leexanaynaa”.
Muuse waxaa loo magacaabay wasiirkii ganacsiga ee xukuumaddii Prof Cali Maxamed Geeddi, balse wareysi uu Muuse siiyay Radio Banaadir, kaas oo sidoo kale BBC-da laga baahiyay ayuu ku yiri “Muxuu yahay wasiir aan gaari lahayn, wasiir aan guri lahayn”, isaga oo ka hor yimid dowladdii uu wasiirka iyo xildhibaankaba ka ahaa.
Ra’iisul Wasaarahii xilligaas ee Soomaaliya, Cali Maxamed Geeddi ayaa xilkii ka qaaday Yalaxow, isagoo sheegay in uu ka soo horjeestay dadaallada xukuumaddiisa ee nabadda uuna wiiqay howlahoodii dib -u -heshiisiinta.
Xigashada Sawirka, FACEBOOK/MUSE
Daawo: Odayaasha beesha Guriceel oo ka horyimid Ahlu-Sunna...
The economy on the brink, Taliban rely on...
Manny Pacquiao: Feeryahanka doonaya in madaxweyne uu ka...
Diblomaasiyadda Rooble iyo dibna qaniinka FARMAAJO
China’s Golden Week travel not expected to return...